Khumbuza ukuba i-raspberries iyinambitha kwaye iphilile kumntu: phantse nawuphi na ummi welizwe lethu uyazi ukuba i-raspberries iyona ndlela isisombululo esilungileyo somkhuhlane nomkhuhlane. Ukusebenza kwama-raspberries ngexesha lokubanda kulula. I-raspberry iqulethe izinto ezininzi ezinokwakheka kwe-bactericidal. I-salicylic acid inomnye weendawo eziphambili phakathi kwazo. Iziphumo ezikhoyo ze-asidi zisetyenziswa kakhulu kwiyeza njenge-antipyretic, i-analgesic kunye ne-anti-inflammatory agents.
Ijusi entsha yamajikijolo yenziwe ilula kakhulu kunamajikijolo. Ngenxa yesi sizathu kubalulekile kubantu ababuthathaka nabagulayo. Ukongezelela, iJusi iyabuqabula kwaye iyancasa yaye iyaziwa kakhulu ngabantwana abancinci. Ngokuthandana naye unokuthelekisa nje ijusi leerberberries okanye i-strawberries.
Ukusuka kwi-raspberry kuphuma i-juice eninzi. I-raspberry iqulethe ukuya kuma-90% ekhulwini lamanzi okuphulukisa, izinto ezininzi eziphilayo, kunye namayeza kunye namavithamini. Isethi yonke ihamba phezu kwe-sock, kwaye kufuneka isetyenziswe kwisithuba seminyaka elishumi ukuya kwishumi elinesihlanu, ngaphandle koko ukusetyenziswa kwayo kuqala ukulahleka. Ijusi ye-raspberry iqulethe i-sugar-sucrose eninzi yemvelo, i-fructose, i-glucose. Ukongezelela, ukubunjwa kubandakanya izinto ze-nitrogen kunye nemibala, iipectin, i-etheral purines, iiprotheni, i-tanins, i-alcohols, iekatekines, kunye ne-acids-caproic, i-citric, i-malic ne-salicylic. Kwijusi yama-raspberries kunye ne-multivitamines - i-vitamin A, B, i-C, E, i-R, i-H, i-mineral-calcium, i-potassium, i-sodium, i-magnesium, i-chlorine, isinyithi, ithusi, i-phosphorus, isulfure, i-boron, i-zinc, i-molybdenum, i-manganese, i-cobalt, i-fluorine.
Zonke ezi zinto, zibambisana kunye, ziphucula iziphumo zonyango kumzimba womntu. Banceda umzimba ulahlwe ukwanda kwamanzi, i-toxins kunye ne-toxins. Uphucula inkqubo yokwakheka kwegazi, imisa i-carbohydrate, iprotheni kunye ne-fatabolism. Izinto ezincedo zikunceda ukugcina umyalelo wokubona, kunceda umsebenzi we-cardiovascular system kunye neentso, ukuqinisa ama-capillaries, ngenxa yoko ukuhamba kwabo kuhla.
Iinzuzo zama raspberries kunye neempahla zayo
I-Raspberry, njengejusi yayo, ithathwa njengeyona nto i-antipyretic ne-sweatshop. Ngexesha lokubanda, kuyimfuneko ukusela i-raspberry juice kunye nobusi busi. Umphumo onamandla ngakumbi we-pathogenic iya kunikwa yerusi efudumalayo. Kwakhona kususa kalula i-toxins ukusuka emzimbeni kwaye uhlambulule iiperesi. Ijusi ephuyiweyo iya kuncitshisa intloko kwaye inqume ukoma kwakho ixesha elide.
Musa ukunciphisa indima yejusi ye-raspberry kunye ne-priaterosclerosis. Iqukethe i-beta-sitosterol. Ingumntu oye wachaza iipropati ze-antisclerotic. Yingakho i-beta-sitosterolase iphosa imida yegazi kwaye ikhusele ukusasazeka kwezifo.
Ijusi le-Raspberry inomdla wesifo sikashukela kunye nesondlo esinciphileyo: enye yesine ukuya kwelinye kwisithathu kweglasi, kathathu ukuya kwesine ngosuku ngemini engamashumi amathathu ngaphambi kokuqala kwesidlo. Ukuba unqwenela, ijusi inokuhlanjululwa ngamanzi acocekileyo.
Ngezifo zesondlo sesisu kunye nokunciphisa amandla, iipunipoji ezimbini ukuya kwethathu zithathwa ngobusi kunye netiyi, phakathi kokutya, oku kuphucula kakhulu ukusebenza kweentliziyo zomzimba kunye nokukhawuleza inkqubo yokwenza igazi.
Ngama-arrhythmias, kuyimfuneko ukusela i-juice entsha ye-raspberry ngexesha lokuvuthwa. Izinto ezikuyo, ngokukodwa i-potassium kunye ne-iodine, zijonge izinga lentliziyo. Ukuba uxinzelelo lwengcinezelo luya kunyuka, luya kuba luqhelekile.
Ijusi ye-raspberry ehlanjululwe ngokutsha inezakhiwo ze-diuretic, iyakususa i-acid yamanani emzimbeni, inceda unyango lwe-hypertension, izintso, i-anemia kunye ne-leukemia.
Kunceda kakhulu ukusela i-raspberry juice emva kokuxhatshazwa okanye ukuhlaselwa yintliziyo. Empuma kusetyenziselwa amayeza kunyango lweengxaki zeentloni, ukungabikho komsebenzi kunye nokungaxhatshazi ngokwesondo.
Kwamachiza omntu, ijusi yayisetyenziselwa ukuphuma kwegastric, kunye ne-anti-inflammatory, antiemetic kunye ne-anesthetic agent. Ijusi le-Raspberry yandinceda kakhulu emva kokuzonwabisa xa kuphakanyiswa i-hangover syndrome. Ukuba unayo ijusi ye-raspberry ehlanjululwe ngokutsha, ungasebenzisa i-malaria ebomvu.
Ijusi yangaphandle isetyenziselwa i-acne, i-eczema kunye nezinye iingxaki zesikhumba. Kwakhona luncedo ekuhlanganyeleni. Baya kuhlamba iso.
Ijusi iya kunceda ukubuyisela isistim somzimba kunye nokukhokelela ekutyeni kwesondlo sesisu. Ngokukodwa kubantu abaye bathatha i-antibiotics ezinamandla kulo lonke unyango lwenkqubo.
Ngama-grams ayi-raspberries kuphela, i-kilocalories kuphela engamashumi amane anesithandathu, i-raspberry ijusi i-calori ephantsi kwaye ingasetyenziswa ngempumelelo ekulahlekeni kwesisindo. Iishukela ezinama-raspberries zikhulu, kodwa le ishukela engokwemvelo elula ngokulula kwaye yenziwe lula ngomzimba, ngoko ijusi izalisekisa umzimba wethu ngezinto ezincedo, ihlambulula iindonga zeemithwalo zegazi kwi-cholesterol, isusa izitya ezinzima kunye nezinye izinto ezinobuthi. Ijusi inefuthe le-laxative kwaye liphucula kakhulu ukusebenza kwamathumbu, ngenxa yoko izilwanyana ziyaqedwa kwaye ubunzima obuninzi bomzimba buncipha. Ukulahla iikhilogram ezintathu ezifakiwe, zanele ukuhlala kwisidlo se-raspberry iintsuku ezintathu.
Ijusi yejusi e-raspberry
IJosmetology ijusi nayo ayizange idlule. Inceda ukugcina ulusu lukhulile kwaye lunqabile, iinwele zomelele kwaye ziphilile. Ngezantsi sizinike iindlela zokupheka ezimbalwa kwiimaski zobuso.
Ukuba unesikhumba seoli - kufuneka uhluthe rhoqo ngejusi yelisi. Uya kufuneka atyunyule kwi-gauze aze asule ubuso bakhe ekuseni, uze uhlambe ngamanzi afudumele. Le nkqubo incono kakhulu kwesikhumba, ngokugqithisa ngokugqithiseleyo kwe-acne kunye ne-acne.
Isikhumba kunye namabala e-pigment kunye ne-freckles, ijusi ihlambulukile, ihlambulukile, ithambile kwaye iyabuqabuyisa. Yonke into efunekayo kule nto ukukhenkcela kwi-sokevatku okanye i-gauze, idibaniswe ngaphambili kwaye ubeke ubuso bakhe ngemizuzu elishumi elinesihlanu. Unokwenza umququze nge-napkin kamva ukuba uthe walala ngaphambili. Awudingi ukuhlamba emva kwenkqubo. Kwanele ukusula ubuso nge-waddeddisk. Ukuba ulusu lumile, ke ngaphambi kokuba usebenzise imaski kufuneka kutyutywe ngekhilimu.
Ngenxa yezifo zesibindi, iJusi iyona nto ingcono ukuba ungaphuzi, njengendlela yokuziphendulela. Ngengxaki enjalo, kungcono ukuyinciphisa kunye nendawo enye.
Ijusi ehlanjululwayo iqala ukunika abantwana ukuya kwiminyaka emibini, emva koko bayandisa isabelo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iintlobo ezimnyama kunye nephuzi ze-raspberry zivame ukubangela ukunyuka. Kodwa ngaphambi kokuba uqale unyango ngejusi, kufuneka udibane nodokotela.
Walnut isonka sesibini!
Iintlobo kunye nokuxhamla kwemveliso yemvelo
Umfi uphupha: ukuthini oku kuthetha ntoni?
UVgeny Tsyganov washiya umfazi wakhe wesixhenxe ngomntwana
Iimpawu kunye nezivumo zeVasiliev kusihlwa
Ukupheka kweesobho ze-saury
Intombazana ayifuni ukulala ngesondo
Indlela yokubuyisela ubuhlobo obudlulileyo kunye nomfana?
Xa idlulileyo idonsa emnyango: indlela yokuziphatha ngayo nomntu ongaphambili
Kwiqhotyoshelweyo "Umboniso" wesenzo somdlali we "Leningrad" wasePetrograd
Ukuba iinwele ezigcobileyo
Jam kusuka kuma peaches